Banijya News | » नेप्सेमा तीन पटक सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेर कारोवार बन्द नेप्सेमा तीन पटक सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेर कारोवार बन्द – Banijya News
नेप्सेमा तीन पटक सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेर कारोवार बन्द
शेयर बजारमा मंगलबार उछाल आएपछि कारोबार बन्द गरिएको छ । नेप्से परिसूचक ६ प्रतिशतभन्दा धेरै बढेपछि कारोबार शुरु गरिएको करीब दुई घण्टामै बजार बन्द गरिएको हो । । हिजो नकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेर केही समय बन्द भएको नेप्से आज भने तीन पटक सकारात्मक सर्किट ब्रेक लागेर बन्द भएको हो ।कारोबार खुल्ने बित्तिकै बजार बढ्न शुरु गरेको थियो । एक घण्टा नपुग्दै ४ प्रतिशतले बजार बढेपछि २० मिनेटका लागि कारोबार स्थगित गरिएको थियो । त्यसपछि पनि बजार बढ्ने क्रम थामिएन र ५ प्रतिशतले उकालो चढ्यो । सर्किट ब्रेकर लागेर बन्द भएको बजार खुलेपछि पनि उकालो चढेर ६ प्रतिशत नाघेपछि मंगलबारका लागि कारोबार स्थगित गरिएको हो ।
पहिलो दिन ५२ अंकसम्म घटेर ३९ अंक बाउन्स ब्याक भएको बजार दोस्रो दिन ७२ अंकले बढेर बन्द भएको छ । मंगलवार नेप्से परिसूचक १ हजार २६० दशमलव ७५ मा बन्द भएको छ ।
मंगलवार दुई घण्टामा १३४ कम्पनीको रू. २२ करोड ७२ लाख १२ हजार बराबरको ४ लाख ८९ हजार ५३७ कित्ता शेयर कारोबार भएको छ । यस दिन कारोबारमा आएका १२ समूहमध्ये होटल र म्युचुअल फण्डको परिसूचक घटेको छ । बाँकी सबैको परिसूचक बढेको छ । होटल समूहको परिसूचक ३ दशमलव १३ र म्युचुअल फण्डको शून्य दशमलव ३३ प्रतिशतले परिसूचक घटेको हो ।
मंगलवारको कारोबारमा व्यापारिक समूहको सबैभन्दा धेरै ८ दशमलव ३२ प्रतिशतले परिसूचक बढेको छ । यस दिन हिमालयन डिष्टिलरीको सबैभन्दा बढी रू. ३ करोड ६४ लाख ३८ हजार बराबरको शेयर कारोबार भएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको शेयरमूल्य मंगलवार रू. ३८ ले घटेको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र ओरियण्टल होटलको शेयरमूल्यमा मंगलवार नकारात्मक सर्किट लागेको छ । ओरियण्टल होटलको शेयरमूल्य रू. ३३ ले घटेको छ ।
९८ दिनपछि खुलेको नेपालको शेयर बजारमा दोस्रो कारोबार दिन भने लगानीकर्ताको मनोबल उच्च देखिएको यस्लाई टिकाउन सके कोरोनाको प्रभावबाट बजार मुक्त हुने विश्लेषक बताउँछन् ।